Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-agbanyụ saịtị ha iji gbalịa ịlụ ọgụ megide Iwu Nchedo IP (PIPA) / SOPA nke a na-enyocha ebe a na United States. Kama ịrịba n'ụgbọala ahụ ma mechie ebe nrụọrụ m, echere m na ọ ga-aba uru karịa ịkọrọ gị mmeghachi omume m.
Anyị nwere ihe karịrị 2,500 blog posts na Kwalite teknụzụ nke na enyere ụlọ ọrụ na ndị ahịa ahịa gburugburu ụwa aka. Anyị akwụbeghị ụgwọ maka ọdịnaya anyị ọ bụla, anyị agaghịkwa akwụ ụgwọ. Mgbe a wuru anyị, anyị na-ewekarị oge iji nyochaa ngwaahịa ma ọ bụ akụkọ a - anyị na-edekwa ozi ahụ na-akwụghị ụgwọ. Anyị enweela ihe ndekọ dị egwu site na ụlọ ọrụ ndị kwuru na anyị bụ naanị blọọgụ mara nke ahụ ọ dugara na ikpughe dị ukwuu na uto maka ngwa ọrụ ha.
Anyị nọ na aha mbụ na ọtụtụ na teknụzụ na ụlọ ọrụ mmekọrịta ọha na eze n'ihi na anyị nwere ọkụ enyemaka. Ọ bụ ezie na blọọgụ ndị ọzọ na-achọ ịdọka ụlọ ọrụ ma ọ bụ teknụzụ, ị ga-ahụ na ọkwa anyị na-akwado nke ukwuu. Anyị chọrọ ka ị nwee ihe ịga nke ọma. Anyị chọrọ ka ị nwee ihe ịga nke ọma na ngwọta. Anyị chọrọ ịchọta azịza ndị ahụ.
Taa, anyị nwere nzukọ na ndị nnọchianya obodo anyị na Indiana iji kwurịta nchegbu anyị na ndị Chedo IP emume na SOPA. Ọ bụ ezie na ndị isi ahụ nabatara ya, ha ekwughi ma onye nnọchi anya anyị na-akwado ụgwọ ahụ. Nke a bụ ụfọdụ ozi ndị ọzọ - mana biko gụọ ihe edeturu m n'okpuru m na nchegbu m.
Banyere ndị nnọchi anya anyị, agbachitere DNS ahụ ma chọọ onye ọzọ iji chọpụta ma ọ ga-egbochi saịtị ahụ ma ọ bụ na ọ gaghị egbochi ya. Nkọwa okwu ahụ dabere na saịtị naanị saịtị nwere ike igbochi bụ saịtị ndị mba ọzọ. Abughi m onye ọka iwu, yabụ echeghị m na nke ahụ bụ eziokwu ma ọ bụ na ọ bụghị.
Washington bụ obodo jupụtara na ndị ọka iwu. Ha anaghị echetakarị na ndị anyị na-enweghị ikike iwu anaghị agbachitere onwe anyị nke ọma. Nke a, n’uche nke m, ọ bụ ihe echedoro IP na SOPA Ọrụ ka ha mee. Ha bụ ngwa ọrụ nke ụlọ ọrụ na-anwụ anwụ gas ikpe azụ ikpeazụ iji gbalịa igbochi ihe a na-apụghị izere ezere. Ihe atụ ahụ m nyere bụ onye na-ere ahịa na-ajụ itinye mkpọchi n'ọnụ ụzọ ha. Ebe ọ bụ na ha enweghị ike ịchọpụta etu ha ga-esi chebe onwe ha, ha na-arịọ gọọmentị ka ha chebe ya maka ha.
Anaghị m ede ihe a naanị site na otu blogger. Anyị na-enye ọdịnaya yana atụmanya na a ga-asọpụrụ ikike nwebisiinka anyị. N'oge ụfọdụ ọ bụghị na m emewo ihe. Enweela m ike igbochi saịtị, kọọrọ ha sistemụ mgbasa ozi, ma nwee ụlọ ọrụ ndị ọzọ - dịka ụlọ ọrụ foto ngwaahịa - na obere akpa na-eso ha. Nke ahụ pụtara na obere ol 'Doug enweela ike igbochi ịda iwu ma lụso ya ọgụ na enweghị gọọmentị itinye aka na ya. N'ezie, nke a abụghị ihe ọgụgụ isi m n'agbanyeghị - ọ bụ maka ihe nkiri na ụlọ ọrụ ihe ndekọ na-emebiwanye uru.
Biko wepụta oge iji gụọ ọmarịcha nkọwa ma ghọta etu ọ ga-esi emetụta gị, ọdịnaya gị, yana azụmaahịa gị. Ikwesighi ịbụ onye America, ịntanetị enweghị oke ala anyị nwere ike itinye ndị agha na… na ndị nọ na United States bụ n'ihe ize ndụ ka ukwuu karia ka ayi. Gụkwuo na Kwụsị mmachi America.